Eng: Yariisoow oo Xilka laga qaadayo , yaa bedelaya Xogmuhiima!
Thursday May 03, 2018 - 00:19:20 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Ilo xog ogaal ah ayaa xaqijiyay in Kooxda Nabad iyo Nolol ay la damacsan tahay in Ruux iyaga kamid ah laga dhigo Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho.
Shaqsiga la damacsan yahay in laga dhigo Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa ah Mudane Axmed Maxamed Nuur Waashitoon, oo ah maareeyaha dekadda Muqdisho xiligaan waxaana wata Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Xog aan helnay ayaa sheegeysa in Axmed Waashitoon ,loo diyaarshay wareegto kazoo baxda xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo si loogu badalo Gudoomiyaha Banaadir Eng: Yariisoow.
Dad aad ugu dhow Madaxweynaha Soomaaliya laguna kalsoon yahay ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu go”aan ku gaaray xil ka qaadis uu ku sameeyo Gudoomiye Eng: Yariisoow si loogu badalo Axmed Waashitoon.
Waxaa xil ka qaadista Eng: Yariisoow la damacsan yahay in loo maro dacwado badan oo ay ugu horeyso wada shaqeyn la”aanta Eng: Yariisoow iyo Xafiiska Madaxweynaha ka dhaxeyn sidoo kale dad Madaxtootayada dajisay Hoteelo oo Dowladda taageri jiray oo uu lacagahi ka jartay.
Sidoo kale Eng: Yariisoow ayaa aaminsan in R/wasaare Khayre kaliya xafiiska ku heyn karo maadama xariirkii Madaxtooyada Gudoomiyaha Gobalka khilaaf xoogan soo kala dhex galay maadama Eng: Yariisoow markii hore ku yimid rabitaanka Khayre balse Madaxweynaha kadis loogu dhigay.